CAALAMKA ONLINE - Galxamur
BBC ► 04:00 GMT
BBC ► 11:00 GMTBBC ► 2:00 PM
BBC ► 14:00 GMTBBC ► 5:00 PM
BBC ► 18:00 GMTBBC ► 9:00 PM
VOA ► IDAACADDA SUBAXNIMO
VOA ► IDAACADDA GALABNIMO
VOA ► IDAACADDA FIIDNIMO
DEUTSCH - SOMALIQaamuus
Ra'iisulwasaaraha Turkiga: Meeshii aad idinkoo Boqol Kun ah isugu timaadaan waxaa aan la imaanayaa Hal Malyan
Monday, 10 June 2013 20:04
Ra'iisulwasaaraha Turkiga ayaa waxaa uu yiri asagoo taageerayaashiisa la hadlaya ulana jeeda Dadka Mudaharaadka ka wada Magaalooyin badan oo Turkiga ah,: Meeshii aad idinkoo 100.000 ah isugu timaadaan waxaa aan ana la imaanayaa 1.000.000 (Hal Malyan).
Wadanka Turkiga ayaa iyaamihii ugu danbeeyey oodhan waxaa ka socdey Mudaharaadyo rabsho wata oo ay dhigayaan Dad aan la garamnayn waxa ay rabaan.
Mudaharaadka ayaa wuxuu markii ugu horeysey ka bilowday, markii Meel Park ah oo Bartamaha Istanbul kutaal la damcay in Dhir lajaro si dhismo weyn ay dukaamo ku dhexyaalaan laaga dhiso. Markaa ayey Dad waxaa ay bilaabeen inay mudaharaadaan, kadibna waxaa ay isku dhaceen Booliska. Intaa kadib ayaa marba markii kadanbeyey uu sii xoogeytey Mudaharaadkii wuxuuna ku faafay magaalooyin kale iyo xitaa Magaalooyin ka mida wadamo kale oo ay samaynayaan Turkiga wadamadaa kunool.
Bolisha ayaa waxaa ay damceen markii hore inay kala cayriyaan Dadka Mudaharaadka dhigaya, waase u suuroobi weydey dhaliil ayaana dusha looga tuuray Gudaha iyo dibada ka kala imaanaysa. Markaa ayey xoogaa dib u gurteen, Dadkii Mudaharaadka wadeyse way iskasii wateen Mudaharaadkoodii welibana rabsho ayey sameeyeen wqax yaalo badana waa ay burburiyeen.
Meeshii awal Mudaharaadku kabilowday Dhir ladamcay inlajaro, ayaa waxaa ay hadda isu rogtey inay dalbadaan dadka Mudaharaadka waday in Xukuumada iyo Ra'iisulwasaaraha Turkigu iscasilaan.
Cabsi weyn ayaa laga qabaa inay iskudhacaan Dadka Mudaharaadka wada iyo Taageerayaasha Ra'iisulwasaraha turkiga oo ilaa hadda wax dhaq dhaqaaq ah samayn, laakiin si tartiib tartiib ah dulqaadku uga dhamaanayo.
Published in WARARKA CAALAMKA
Shirkad Isgaarsiin oo Maraykan ah oo Makamad ku xukuntay inay Xagta Isgaarsiinta ee Macaamisheeda oodhan u soo gudbiyaan Sirdoonka Maraykanka
Thursday, 06 June 2013 12:41
Shirkad Isgaarsiineed oo Maraykan ah ladhaho 'Verizon' ayaa Maxkamad kutaal Maraykana waxay ku xukuntay, inay Xogta Isgaarsiineed ee Macaamisheeda u soo gudbiyaan Sirdoonka Maraykanka ee la dhaho NSA.
Waa markii ugu horeysey baa la yiri oo Sirdoonka Maraykanka ay dalbadaan Xogta Isgaarsiinta ee Muwaadiinta Maraykanka, ayada oon lakala saarin Qofka laga shakisanyahay iyo kan kale. Dadka oo dhan ayaa isku qaab loola dhaqmay waxay doonaan ha ahaadeen e.
Sirdoonkaa Maraykanka ee NSA ayaa waxaa la sheegay markii 2001 Qaraxyada Argagixo loo geystey Maraykanka inay Dadka si qarsoodi ah Xog uga ururin jireen, laakiin 2006 ayaa waxaa fashilay Joornaal Maraykanka kasoo baxa oo dibada soo dhigay Fadeexadaa.
Dhanka kale Sirdoonkaa Maraykanka ee NSA ayaa waxaa la sheegay inay Isgaarsiinta Dunida 90% la socdaan waxaa E-Mail, Telefon, Chat ama Fax iyo wixii lamida ay aqrisankaraan amaba aqristaan ama dhageystaan.
Faransiiska iyo Ingiriiska oo qiray inay Ciidamada Suuriya isticmaaleen Gaaska Sunta ah
Wednesday, 05 June 2013 21:43
Waddamada faransiiska iyo Ingiriiska ayaa waxaa ay qireen inay Ciidamada Suuriya adeegsadeen Gaaska Sunta ah ayna Cadayn hayaan. Waddanka Suuriya ayaa iyaamihii ugu danbeeyey oodhan waxaa lagu eedeynayey isticmaalka Gaaska Sunta ah, laakiin wax Cadayn ah lama hayn.
Madaxweynaha Maraykanka ee Barack Obama ayaa horay wuxuu u sheegay in haddii Ciidanka Suuriya ay isticmaalaan Gaaska Sunta ah, ay dhaafayaan Xuduud lamadhaafaan ah uuna Maraykanku Faraha lasoo galayo arimaha kasocda Suuriya.
Inkastoo Marar badan lagusoo celceliyey inay Ciidanka Suuriya isticmaaleen Gaaskaa Sunta ah, hadana Maraykanka ayaa wuxuu ku adkaysanayaa inaysan wax Cadayn ah hayn oo cadaynaya in Gaas Sun ah la adeegsadey.
Mucaaradka Suuriya oo Guuldarro kala kulmay Daagaalkii kasocdey Magaalada Al-Kusair
Wednesday, 05 June 2013 21:34
Mucaaradka Suuriya ayaa waxaa ay qirteen inay guuldarro kala kulmeen dagaalkii ka socdey Magaalada Al-Kusair oo kutaal Xuduuda Suuriya iyo Lubnaan.
Magaladaa ayaa waxaa ka socdey 2 dii asbuuc ee u danbeeyey Dagaal kharaar oo u dhexeeyey Mucaaradka iyo Ciidamada Suuriya oo ay ka garab dagaalamayaan Maleeshiyo Urururka Xisbullaah ee Lubnaan ka tirsan.
Waayidda Magaaladaa Al-Kusair oo meel Istraataji ah kutaal ayaa waxaa ay ku noqonaysaa Mucaaradka Suuriya Guuldarro weyn, maxaa yeelay waxaa ugasoo gudbi jirey Xuduuda Hub iyo Dagaalyahanno, Dadka qaxayna waxaa ay ka gudbijireen Xuduuda.
Nawas Sharif oo Raysulwasaaraha Pakistan loo doortay
Wednesday, 05 June 2013 21:25
Nawas Sharif oo ku guuleystey Doorashadii bishii hore ka dhacday Pakistan, ayaa waxaa loo doortay Ra'iisulwasaraha Pakistan. Sida uu sheegay Gudoomiyaha Baarlamanka Pakistan 244 ee 342 Xildhibaan e Baarlamaankaa kakoobanyahay ayaa waxaa aydoorteen Nawas Sharif.
Waxaa la qorshaynayaa in Maalmaha soo socda ladhaariyo. Nawas Sharif ayaa 14 Sano kadib markaa la inqilaabay waxaa uu noqonayaa markale Ra'iisulwasaaraha Pakistan. Waa markii uguhoreysey baa layiri ee Xukuumad shacab ah ee si Dimuqraadiyad ah loo doortay ay la wareegaan xukunka.
Sharif ayaa horay Sagaashameedyadii waxaa uu 2 mar noqday Ra'iisulwasaaraha Pakistan, waxaase 1999-kii inqilaabay Militari.
Germayn oo Talyaaniga ku eedeeyey inay Qaxootiga soo gala Talyaaniga u fasaxaan inay Germayn u sii gudbaan
Thursday, 30 May 2013 23:13
Waddanka Garmayn ayaa waxaa ay Talyaaniga ku eedeeyeen inay Xaqootiga Afrika ka yimaada ee Dalkooda soo gala u fasaxaan ama xitaa ku caawiyaan inay Germayn u sii gudbaan. Waxaa ay Talyaanigu siiyaan Qaxootiga Afrikaanka ah ee Wadankooda soogala baa la yiri, Viso 3 Bilood ah oo Waddamada Yurub oo dhan lagu geli Karo iyo Passaport ay ku safraan.
Saa awgeed boqolaal Qaxooti ah ayaa waxaa ay u gudbeen Germayn, markiise ay gaareen ayaan la aqbalin oo waxaa ay noqdeen dibjiro. Maxaa yeelay baa la yiri, sida heshiiska Yurub ka dhexeeya uu dhigayo, waxaa ay tahay in Qaxooti kasta Wadaanka ay marka ugu horaysa soo galaan lagu qaabilo waddan kalena aysan u gudbi karin, sa awgeed Qaxootiga Afrikaanka ah ee markii ugu horaysey Talyaaniga soo galay kadibna Germayn u gudbey ayaan Garmayn wax Caawimaad ah ka helin oo waxaa ay wada noqdeen Dibjiro.
Madaxweynaha Suuriya oo sheegay inay Gantaalo Casri ah Ruushka ka heleen
Thursday, 30 May 2013 23:02
Madaxweynaha Waddanka Suuriya ayaa waxaa uu sheegay inay Gantaalo kuwa Difaaca Hawada oo casri ah ay Ruuska ka heleen. Saa daraadeed isu dheeli tirnaanta awooda ay hadda dhankooda u badantahay, Gantaaladaa Casrigaa ay heleen awgeed. Waxaa uu sheegay Gantaaladaan inay yihiin qaybtii 1-aad qaybta 2 na ay dhawaan ku xigi doonto.
Tuugo inay Shiine yihiin loo malaynayo oo jabsaday Computer Wasaaradda Difaaca e Maraykanka
Wednesday, 29 May 2013 15:44
Waxaa Computer kamida Computerada Wassaradda Difaaca ee Maraykanka jabsaday, Tuugo ah kuwa Computerada jabsada ee loo yaqaan Hacker ka, waxaana ay xadeen Dokumentiyo wax yaalo Sir ah ay ku qornaayeen. Dokumentiyada ayaa waxaa ku qornaa waxyaalaha muujinaya sida loo dhiso iyo sida ay u dhisan yihiin qaar ka mida Diyaaradaha Dagaalka ee maraykanka kuwa ugu danbeeyey uguna casriyeysan.
Waxaa kaloo isla Tuugadaa ay jabsadeen Computer Sirdoonka Waddanka Australia, waxaana ay xadeen sidoo kale Dokumentiyo iyaguna Sir ah oo ay ku qornayd qaabka iyo sida ay u dhisanyahay Dhismo Cusub ee Sindoonka Australia saldhiga u ah.
Midowga Yurub oo Hub u soo gudbinaya Mucaaradka Suuriya
Wednesday, 29 May 2013 15:36
Wadamada Midowga Yurub ayaa waxaa ay go'aan sadeen khilaaf iyo is jiid jiidasho dheer ka dib inay Mucaaradka Suuriya Hub u soo gidbin karaan. Midowga Yurub ayaa tan iyo markii Suuriya Dagaalku ka dhex qarxay waxaa ay dul dhigeen Xayiraad iyo Cuno qabatayn noocxo kala duwan leh oo marba marka ka danbeysa ay sii adkeeyeen.
Tan iyo Mudoba waxaa jirtay muran ka dhextaagnaa Midowga Yurub oo ah in Mucaaradka Suuriya la hubeyn Karo iyo in kale. Wadamada Faransiiska iyo Ingiriiska ayaa waxaa ay ololaynayeen in Mucaaradka Suuriya la hubeeyo, saa awgeed Xayiraadda Hubka la qaado. Wadamada kale ee Yurubna qaar ayaa waxaa ay ku andacoonayeen, in Xal loo helo arinta Suuriya ee aan loo deyn inay Hubku hadlaan.
Markiisi kulankii ugu danbeeyey ay yeesheen Wasiirada Arimaha Dibada ee Yurub, go'aan ay isku raacsan yihiinse aysan gaarin, ayaa waxaa ay isku raaceen in laga Mucaaradka Suuriya Hub la siin Karo.
London oo Nin Gaari la jiirsiiyey ka dibna Baangad iyo Midiyo lagu diley
Thursday, 23 May 2013 15:56
Waxaa magaalada London ee Caasimada Dalka Ingiriiska ka dhacay arin la yaab leh, ka dib markii 2 Nin ay Nin meel London gudaheeda ah wadada marayey ay Gaari jiirsiiyeen ka dibna Baangad iyo Midiyo ay ku dileen. Ninka la diley ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa Askari ka tirsan Ciidamada Ingiriiska. Askariga ayaa waxaa uu gashanaa baa la yiri Funaanad ay ku qorantahay Magaca Urur caawiyo Ciidamada Ingiriiska ee Ciraaq iyo Afghanistan ka dagaalaymay ee wacyeladu soo gaartay.
Nimankii Dilka geytey ayaa Boliska London dhaawaceen ka dibna waxaa ay geeyeen 2 Isbitaal oo magaalada ku yaal halkaasaana lagu daweyynayaa. Sababta ay arintan la yaabka leh u sameeyeen ayaan weli la cadayn, walow la sheegayo war shegaya inay Argagixiso ka danbayso Falkan.
CONTACT/ XIRIIR: caalmakonline@gmail.com